အမေရိကန်နှင့် Huawei တို့ ဘာတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ? - PX
အမေရိကန်က ကုန်သွယ်ရေး Block List ထဲ ထည့်သွင်းခဲ့တဲ့ Huawei Technologies Ltd ကိုတော့ ၁၉၈၇ ခုနစ်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Founder ကတော့ တရုတ်ပြည်သူစစ် တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း Ren Zhengfei ဖြစ်ပါတယ်။
သက်တမ်း ၃၂ နှစ်ရှိနေပြီးဖြစ်တဲ့ Huawei ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာအကြီးမားဆုံး ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်နေပါတယ်။ Huawei ရဲ့ အဓိက ထုတ်ကုန်တွေကတော့ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက် နဲ့ ပက်သက်တဲ့ Equipment တွေနဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။
Huawei ရဲ့ စမတ်ဖုန်း ရောင်းချရမှုဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာအဆင့် ၂ နေရာမှာ ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပြီး အခုနှစ် ပထမအပတ်ရောင်းအားတင် အလုံးရေ ၅၉ သန်းအထိ ရောင်းချထားနိုင်ခဲ့ကာ ထိပ်ဆုံးနေရာမှာရှိတဲ့ Samsung နဲ့ သိပ်မကွာတော့တဲ့ အနေအထားမျိုးမှာရှိနေပါတယ်။
အမေရိကန်အစိုးရ အနေနဲ့ Huawei ကို တရုတ်အစိုးရ ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ထားပြီး Huawei ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ပစ္စည်းတွေဟာ နိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက် Risk ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆထားတာကြောင့် အသုံးမပြုဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။
သို့သော်လည်း Huawei ရဲ့ 5G ဟာ နည်းပညာပိုင်း နဲ့ ဈေးနှုန်းပိုင်းဟာ အခြား အော်ပရေတာ တွေထက် ပိုမိုကောင်းမွန်နေတာကြောင့် အမေရိကန် ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့ ဂျာမနီ ၊ ပြင်သစ် နဲ့ UK လို နိုင်ငံတွေကတောင် မကြာခင်က Huawei နဲ့ လက်တွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ ကမ္ဘာ့အနှံအပြားကို 5G နဲ့ အုပ်စိုးလာတဲ့ Huawei ဟာ အမေရိကန်အစိုးရ အတွက် တကယ်ကို အိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပြီး သူတို့ရဲ့ စူပါပါဝါ ချိန်ခွင်လျှော ကို အတက်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့က Huawei ကို Trade Block List ထဲထည့်လိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ 5G အတွက် Huawei နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့ နိုင်ငံအရေအတွက် တိုးတက်လာတာကြောင့်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဘာကြောင့် Huawei အနေနဲ့ ဒီလောက်ထိ တိုးတက်လာတာလဲ?
အဓိက အချက်ကတော့ R&D (Research & Development) ကို ရှယ်လုပ်လို့ပါ။ ဂျာမန်သတင်းစာ Bloomberg ရဲ့အဆိုအရ Huawei ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က Research ပိုင်းမှာ ဒေါ်လာ ၁၅.၃ ဘီလီယံ တောင်ရင်းနှီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ကထက်သုံးခဲ့တဲ့ ငွေးကြေးရဲ့ ၂ ဆ ပမာဏ ဖြစ်ပါတယ်။
R&D အတွက် အများဆုံး အသုံးပြုတဲ့ ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ ၁၀ ခု စာရင်းမှာလည်း Huawei ပါဝင်နေပါတယ်။ Huawei ထက် ပိုအသုံးကြမ်းတဲ့ ကုမ္ပဏီကတော့ ကမ္ဘာအကြီးဆုံး E-commerce Marketplace ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Amazon ပဲဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း R&D မှာ ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုအများဆုံး ပြုလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီစာရင်းမှာလည်း ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သတင်းတွေအရ Huawei ဟာ R&D မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံး ထိပ်ဆုံး ၄ နေရာမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမနေရာမှာတော့ Amazon က ၂၈.၈ ဘီလီယံ နဲ့ဦးဆောင်ထားပြီး သူနောက်မှာတော့ Google ရဲ့ မိခင်ကုမ္ပဏီ Alphabet က (၂၁.၄ ဘီလီယံ) ၊ Samsung က (၁၆.၇ ဘီလီယံ) နဲ့ Apple က (၁၄.၂ ဘီလီယံ) အသီးသီး အသုံးပြုထားပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်က ကြည့်ရင် Huawei ဟာ သူရရှိတဲ့ အမြတ်ထဲက ၁၄% ကို R&D အတွက်သုံးထားပြီး Alphabet (Google) က ၁၆% နဲ့ Samsung နဲ့ Apple က ၈% နဲ့ ၅% အသီးသီး သုံးထားပါတယ်။
ကမ္ဘာအကြီးဆုံး စမတ်ဖုန်း ရောင်းချသူဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းနေတဲ့ Huawei အနေနဲ့ မနှစ်က စမတ်ဖုန်းအလုံးရေသန်း ၂၀၀ ကျော် ရောင်းချခဲ့ရပေးမဲ့ Samsung နဲ့ Apple တို့နောက်မှ ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Huawei ရဲ့ R&D အပေါ် လောင်ထည့်ခဲ့တဲ့ လောင်စာတွေကတော့ အခုအချိန်မှာတော့ စတင်တောက်လောင်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Huawei ရဲ့ P20 Pro ဟာ ပထမဆုံး ကျောဘက် ကင်မရာ ၃ လုံးပါဝင်တဲ့ ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် Mate 20 Pro မှာလည်း Reverse Wireless Charging လို့မျိုး Features မျိုးပါဝင်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Samsung ရဲ့ Galaxy S10 Line မှာ (PowerShare) ဟာလည်း Huawei ရဲ့Reverse Wireless Charging လိုပုံစံမျိုးကို လုပ်ထားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Apple ရဲ့ 2019 iPhone Models တွေမှာလည်း Huawei ဖုန်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ Features တစ်ချို့ပါဝင်လာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ ဒါအပြင် 2016 ခုနစ်ထဲက ဂျာမန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Leica နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ကင်မရာပိုင်း စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ P30 Pro ရဲ့ကင်မရာ အကူအညီ နဲ့ လ ကိုတောင် သေချာရိုက်ကူးပေးနိုင်တဲ့ အထိ Hybrid Zoom တွေဟာ တိုးတက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် အစိုးရ ရဲ့ပိတ်ဆို့မှု အသစ်ကြောင့် Google ၊ Qualcomm နဲ့ Intel တို့ဟာ သန်းနဲ့ချီတဲ့ User တွေ ကို ဆုံးရှုံးရဖို့ရှိနေပေမဲ့ Huawei အနေနဲ့ Flagship Chipset တွေအပြင် 5G Chipset တွေကို ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ထားကြောင့် အရမ်းကြီးတော့ ဆိုးရွားသွားဖွယ်မရှိပါဘူး။ ဒါအပြင် 5G ကွန်ရက်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်း ကုန်ကြမ်းတွေကိုလည်း ဒေါ်လာ ဘီလီယံ နဲ့ချီ အများအပြား သိုလှောင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
သို့သော်လည်း Android/Google Services တွေ ကို ဆုံးရှုံးမယ်ဆိုတာကတော့ Huawei အနေနဲ့ ထိခိုက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။Huawei အနေနဲ့ Trump ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုအသစ်အပေါ် သိပ်ပြီး Shock ဖြစ်သွားပုံမပေါ်ပဲ ကိုယ်ပိုင် OS Hongmeng ကိုတောင် ချက်ချင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Huawei Hongmeng OS has been under development for nearly7years.
မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိတာက ဒီ OS က Android လောက် ကောင်းမှာလား ၊ Developer တွေ အနေနဲ့လည်း ဒီ OS အပေါ် ဘယ်လောက်ထိ Support ပေးမှာလည်းဆိုတာပါပဲ ၊ အရင်က Android နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အတွက် Samsung အနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင် Tizen OS လိုမျိုး ပြုလုပ်ခဲ့ပေးမဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ချင်မရှိတာကြောင့် Huawei အနေနဲ့ ဘယ်လို့မျိုး ဆက်လုပ်မလည်းဆိုတာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပါပဲ။
တရုတ်အစိုးရ အနေနဲ့ Huawei ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံ ဟုတ်သည် ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ သူနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီအပေါ်မှာ အပြည့်အဝ ထောက်ပံ့ပေးလာဖို့ရှိနေပါတယ်။ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းမှာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Apple ရဲ့ iPhone တွေကို မသုံးဖို့ ကမ်းပိန်းတွေ စတင်နေပြီး Apple အနေနဲ့လည်း သူရဲ့အကြီးမားဆုံး ဈေးကွက်မှာ အမေရိကန် အစိုးရ ရဲ့ကြောင့် ပလိန်းကြီး ခံနေရတဲ့ ပုံပါပဲ။
တရုတ် နဲ့ အမေရိကန် တို့ရဲ့ Trade War ကြောင့် တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် အပြန်အလှန် မှီခိုနေရတဲ့ ဒီနည်းပညာ ကုမ္ပဏီ တွေဟာ ကြားညှပ်နေခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်လုံး တိုင်တွေပတ်ကုန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေ ကို တောင်ကိုရီးယား အခြေစိုက် Samsung အနေနဲ့ အခွင့်ကောင်းယူသွားမလား စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။